Madaxweynaha iyo wafdigiisi oo soo dhamaystay booqashadii Suudaan | Radio Muqdisho
Madaxweynaha iyo wafdigiisi oo soo dhamaystay booqashadii Suudaan
Published on January 3, 2013 by admin · 2 Comments · 3,654 views
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigii uu hoggaaminayay ayaa soo gaba gabeeyay safarkii ay ku joogeen dalka Suudaan iyadoona kulamadii ay la qaateen mas’uuliyiinta dowladda Suudaan uu ku soo dhamaaday guul.
Mudane Xasan Sheekh Maxamuud Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo mudo laba maalin ah ku sugnaa dalka Suudaan isago iyo mas’uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa maanta xaflad sagootin ah loogu sameeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Khartuum.
Madaxweynaha ayaa kulan xalay kula qaatay madaxtooyada Qaranka dalka Suudaan dhigiisa dalkaasi waxeyna labada Madaxweyne ay kulankooda waxyaabihii looga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa dib u dhiska dalka iyo ka qeyb qaadashada tababarada ciidamada dowladda Soomaaliya.
Sidoo kale Madaxweynaha iyo wafdigii la socday ay booqdeen intii ay ku sugnaayeen dalkaasi warshada daabaceysa lacagta Shilinka Soomaaliga ah oo haatan ka socota dalkaasi, madaxweynaha oo hadal ka jeediyay goobta ayaa sheegay in dib loo dhigo daabicida lacagta loogu talagalay dalka si loo dajiyo dalka si ay saameyn ugu yeelan dadka Soomaaliyeed.
Mahdi yare says:	January 3, 2013 at 5:49 pm	Madaxwenaha waxuu yihid daldalbadan oo kamid ah africa marka waxuu uyimaadanweesanyahay sod arfica oo kudhibaateesan dad badan oomuwaadin soomali ah marka mudanaha waxaa laku fadhiyaaa in uu wax kaqabto
Reply »	Ahmed Omar Says says:	January 3, 2013 at 6:17 pm	Maashaa’Allaah waa arin guul ah Madaxweynaheyna iyo mas’uuliyiinta aad ayay idin jecelyihiin Umadda Soomaliyeed shaqada wacan horay u sii wada hambalyo, hambalyo. tan kale, madaxweynaheena waxaan ka sugaynaa in uu booqdo Koonfur Africa; halkaasi oo Soomaalida badan tacadiyo loogu geesto gaar ahaan ganacsatada ok .